SAWIRO: Taageerayaasha Man United Oo Old Trafford Hortiisa Ugu Fashilmay Si Ka Xun Qaabkii Ay Kooxdoodu Premier League Ugu Fashilantay. - Gool24.Net
SAWIRO: Taageerayaasha Man United Oo Old Trafford Hortiisa Ugu Fashilmay Si Ka Xun Qaabkii Ay Kooxdoodu Premier League Ugu Fashilantay.
Jamaahiirta kooxda Manchester United ayaa fashil xun kala kulmay isku day mudaharaad oo ay kaga soo horjeedeen mulkiilayaasha kooxdooda ee Glazers waxayna bilaabeen olole baraha bulshada ka soo bilawday oo uu hal ku dhig u ahaa #GlazersOut.
Laakiin fashilka soo gaadhay taageerayaasha Manchester United ayaa lagu qeexay in uu noqday mid xataa ka sii liitay fashilkii kooxdooda ee xili ciyaareedkii soo dhamaaday ee ay ka cadhaysnaayeen.
Ololaha taageerayaasha Man United ee ay kaga soo horjeedaan mulkiilayaasha kooxdooda ayaa baraha bulshada si wayn uga tis qaaday iyada oo kumanaan taageerayaal ahi ay qayb ka noqdeen #GlazersOut laakiin maxaa dhacay markii Old Trafford hortiisa lagu balamay?.
Dad aan ka badnayn 20 qof oo kaliya ayaa ka soo xaadiray banaan baxa ay jamaahiirta Man United ugu balansanaayeen ee ololaha #GlazersOut kaas oo sida ugu xun ku dhamaaday.
Wariyaha shabakada Goal ee Kris Voakes oo arintan goob joog u ahaa ayaa sheegay in dadka ka soo qayb galay banaan baxa ay taageerayaasha United kaga soo horjeedeen mulkiilayaasha kooxdoodu noqday mid fashil ah.
Kris Voakes ayaa sheegay in dadkii soo galiyay Megastore ama ka baxayay ay ka badnaayeen taageerayaasha Man United ee iskugu soo baxay afaafka hore ee Old Trafford ee ku mudaharaadayay mulkiilayaasha kooxdooda.
Qoyska Glazer family ee iska leh mulkiyada Man United ayaa Old Trafford la wareegay sanadkii 2005 kii laakiin tan iyo markii uu Sir Alex Ferguson uu kooxda ka baxay waxay ku soo dhibtoonayeen sidii ay u sii joogtayn lahaayeen halkii ay Premier league iyo Champions league ku lahaayeen.
Sawirada taageerayaasha Man United ee waji gabaxa la kulmay ayay warbaahinta England soo bandhigeen iyada oo xataa la arkayay shaqsiyaad telefoonadooda gacanta iska adeegsanaya oo goob cidlo ah fadhiya.
Si kastaba ha haaatee, isku daygii ay taageerayaasha Man United ku doonayeen in ay culays ku saaraan mulkiilayaasha kooxdooda ayaa fashil xun ku dhamaaday.